IPlaya Mar Luxury 2 bed apartment free WiFi parking - I-Airbnb
IPlaya Mar Luxury 2 bed apartment free WiFi parking
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguNick
Indawo yam yiflethi okanye indlu ekwicomplex yale mihla eSan Pedro Del Pinatar. Iflethi luhambo olulula lwemizuzu eyi-10 oluya elunxwemeni, kwiivenkile ezinkulu, kwiivenkile zokutyela nakwiibhari.
Sinebhalkhoni kunye nophahla olunendawo yokulawula umbane kunye neetafile, izitulo kunye neendawo zokuphumla. Kukho nepuli entle esetyenziswa nangabanye abantu. Sine-smart cable TV enkulu enamajelo esiNgesi nesiSpeyin, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wekofu weNespresso, i-microwave nayo yonke enye into onokuyidinga ngexesha lokuhlala kwakho.
Kukho amagumbi okulala ayi-2, omabini anebhedi enkulu.
Vula isicwangciso segumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
Igumbi lokuhlala lineesofa eziyi-2 zesikhumba kunye neTV enkulu egobileyo enebhari yesandi ene-TV enamajelo esiNgesi nesiSpeyin.
Ikhitshi linayo yonke into onokuyidinga kuquka i-induction Hob, i-grill, ioveni, umatshini wokuhlamba izitya, i-microwave, i-friji freezer, umatshini wokuhlamba impahla, umatshini wekofu we-Nespresso nazo zonke izinto onokuzilindela kwikhitshi lale mihla.
Ukuze ukhuseleke, sinealam yomsi ibe xa kukho iimeko zongxamiseko kukho isicimi-mlilo nengubo yomlilo. Umatshini olumkisayo xa kukho i-carbon monoxide awufuneki kuba akukho gesi iflethi okanye indlu ekwicomplex.
Kukho amagumbi okuhlambela ayi-2, zombini zineeshawa nezindlu zangasese.
Ngaphandle kukho ibhalkhoni ngaphambili nakwindawo yophahla enezihlalo kunye neetafile. Kukwakho nesikhephe elangeni eseluphahleni kunye nesikhephe esisebenza ngombane esisebenza ngombane ngaphandle kwendawo yokuhlala.
Iflethi ikwindawo ethe cwaka kodwa kuthatha nje imizuzu emihlanu ukuya kwiivenkile zasekuhlaleni, iibhari neevenkile zokutyela ibe uza kuhamba imizuzu eyi-10 ukuya kumalwandle anesanti aluhlaza asePlaya De Villananitos kwiMar Menor.
Sikumgama wemizuzu eyi-30 xa sisuka kwisikhululo seenqwelo-moya esitsha saseMurcia kwaye yimizuzu eyi-45 xa sisuka kwisikhululo seenqwelo-moya iAlicante.
I-San Pedro Del Pinatar ikummandla waseMurcia eMzantsi Mpuma weSpeyin, ekwaziwa ngokuba yiCosta Calida (unxweme olufudumeleyo). Le dolophu ihleli kunxweme lweMar Menor, indawo enamanzi anetyuwa eyahlukaniswe kuLwandle lweMeditera ngeekhilomitha eziyi-22 ubude ekuthiwa yiLa Manga (iLa Manga). Kwiintsapho ezinabantwana abancinci unxweme olunentlabathi olucocekileyo lukhuselekile kakhulu ngamanzi amancinci namaza ambalwa. Kukho i-promenade enomtsalane kunye neebhari zangaphambili zaselwandle. Le ndawo inomyinge weentsuku ezingena ilanga nyaka ngamnye. Zininzi izinto onokuzenza kunye neendawo onokuzibona. Ibhayisekile ithandwa kakhulu kwaye imizila yomjikelezo intle. Ukucoceka nokucoceka kubaluleke kakhulu kuthi ibe Ngenxa yobhubhane wehlabathi siza kucoca ngakumbi size sinciphise iintsholongwane ngaphambi kondwendwe ngalunye olutsha.
55" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Netflix
I-Calle Bergantin ibekwe kwindawo esandul 'ukwakhiwa enezindlu ezinendawo yokuphola neeflethi zale mihla.
Yindawo entle nethuleyo ibe kukuphosa amatye kwiivenkile zasekuhlaleni, kwiibhari nakwiindawo zokutyela. Unxweme luhambo lokwenyani lwemizuzu eyi-10 kwaye lucoceke kakhulu.
Isuphamakethe ekufutshane luhambo lwemizuzu eyi-8 ukuya kweyi-10 kwaye ikwanelisa zonke iimfuno zakho. Ukuba ufuna ukuqesha ibhayisekile sinokukudibanisa nevenkile yokuqesha yasekuhlaleni eza kukunika isaphulelo esihle kwaye singakuthatha sikuse ukuze uqokelele iibhayisekile zakho ukuba kuyimfuneko. Kukho nezinye iivenkile ezininzi eziqeshisa ngebhayisekile kufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex ukuba ungathanda. Ukuqhuba ibhayisekile yindlela efanelekileyo yokuhambahamba eSan Pedro enemizila yeebhayisekile emangalisayo kwaye iflethi kakhulu.
Molo, singabantu abathandanayo besiNgesi ibe injongo yethu kukunika ezona zinto zintle nezempilo esinokuzonwabela ngoxa uhleli nathi. Sisoloko sikhona xa sinemibuzo kwaye sisoloko sizama ukunceda nanini na sinako. Sithetha iSpanish nesiNgesi kwaye sinomntu ococa indlu othetha isiSpeyin naye okhoyo ukuze ancede. Nantoni na ekusenokufuneka uyazi ngaphambi kokubhukisha, nceda uzive ukhululekile ukubuza.
Molo, singabantu abathandanayo besiNgesi ibe injongo yethu kukunika ezona zinto zintle nezempilo esinokuzonwabela ngoxa uhleli nathi. Sisoloko sikhona xa sinemibuzo kwaye sisoloko…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Pedro del Pinatar